Corso di birmano > italiano| Sentimenti | Traduzione
Corso birmano - Sentimenti
Il tuo paese mi piace molto ကျနော် ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ် - kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
Ti amo ချစ်တယ် - chitɁ tai
Sono felice ပျော်တယ် - pyau tai
Sono triste စိတ်ညစ်တယ်/ဝမ်းနည်းတယ် - saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
Sto bene qui ဒီမှာပျော်တယ် - di mha pyau tai
Sento freddo ချမ်းတယ် - chaN tai
Sento caldo အိုက်တယ် - aitɁ tai
È' troppo grande ကြီးတယ် - kyī tai
È troppo piccolo သေးတယ် - thé tai
È perfetto အတော်ပဲ - ah tau pai
Vuoi uscire stasera? ဒီညနေအပြင်ထွက်ချင်လား - di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
Vorrei uscire stasera ဒီညနေအပြင်ထွက်ချင်ပါတယ် - di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
È una buon'idea ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ် - di ah si ah sin kaung tai
Ho voglia di divertirmi ပျော် ချင် လို့ ပါ - pyau chiN loɁ pa
Non è una buon'idea ဒီအကြံမကောင်းဘူး - di ah kyaN me kaung bū
Non ho voglia di uscire stasera ဒီညနေအပြင်မထွက်ချင်ဘူး - di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
Ho voglia di riposarmi ကျနော် အနားယူချင်တယ် - kya nau ah nā yu chiN the lā
Vuoi fare sport? အားကစား သွားလုပ်ချင်သလား - ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
Sì, ho bisogno di sfogarmi! ဟုတ်ကဲ့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်မှဖြစ်မယ် - hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
Io giocoatennis ကျနော် တင်းနစ်(စ)ကစားတယ် - kya nau tin nitɁ ka sā tai
No grazie, sono abbastanza stanco မကစားချင်ပါဘူး မောနေလို့ - me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ